Isitayela seProvence sasivela eFrance, esivela eProvence, lapho ihlobo elingunaphakade lihlala libusa khona. Kungabizwa ngokuthi izwe laseFrance elinomthelela wesonto. Manje abaningi bakhetha lesi sitayela sezwe esithile sezindlela zabo zangaphakathi. Ikamelo lokulala le-Provence kufanele lenze ngcono ukufudumala kwabakwaSomandla. Lesi yisici esibalulekile sabahlali besifundazwe igama elifanayo. Ngaphezu kwalokho, into esemqoka ehlukanisa ikamelo elinjalo lilula, lisebenza futhi lenduduzo.
Amakamelo anesakhiwo esifanayo kumele aphakanyiswe ngokukhanya kwemvelo. Kusemthethweni ukusebenzisa izinto zemvelo noma ukuzilingisa. Ubuningi bezitshalo, kungakhathaliseki ukuthi bukhoma noma buvulekile, wamukelekile. Isixazululo sombala sezulu ngokuqondene nomhlobiso wezindonga kufanele sibe mhlophe. Kodwa-ke, amanye amathoni amancane, amancane afanelekile. Kuhle kakhulu kuzobukeka njenge-lemon, i-lavender, i-ocher noma i-turquoise. Emadongeni kufanele futhi abe nezithombe zamalungu omndeni kulawo ozimele. Isixazululo esihle ukuqedela iphepha lodonga labo ngesithombe sezimbali ezincane kakhulu ezingafani kakhulu.
Idila kumele libe mhlophe. Ngokuvamile igumbi lokuphumula esitayela seProvence lihlotshiswe ngezigxobo zokuhlobisa. Ngezinye izikhathi balingisa umuthi, futhi ngezinye izikhathi babophe emhlophe. Kungaba imigqa emibili efana noma ehlangene, kanye nezincane ezincane. Ngokuqondene nomngane, kumelwe ukuba kube yinsimbi futhi yenziwe. Izinsimbi ezincane zensimbi zizobonakala zihle kakhulu.
Ngaphansi, isisombululo esihle kunazo zonke ngamabhodi wokhuni noma amatshe amatshe angokwemvelo. Ezimweni ezimbi kakhulu, futhi ulingise. Uma usebenzisa i-carpet, bese wenza ngesandla kuphela. Izinto zangaphakathi ezikhethekile, ezenziwe ngesitayela seProvence, nazo zihlanganisa ifenisha yokhuni. Futhi akufanele kube yinto entsha. Kukhula ngisho nalapho kudingekile. Le varnish nepeyinti isetshenziselwa ubuncane, ngoba umbala wemvelo kanye nesakhiwo sezinkuni zikhethwa. Impahla eyakhiwe nayo iyamukeleka.
Kuhle kakhulu, uma kwenye yamatafula kuyoba khona ibhasikidi lesithelo. Njengoba umhlobiso ofanayo kufana kahle. Ngaphezu kwalokho, izesekeli ezisetshenziswa kaningi njengezithombe ezimnandi zesigodi kanye namakhandlela e-antitique. Igumbi lokuhlala ngesitayela seProvence kufanele sibe into efana ne-boudoir yaseParis. Amakhiwane angenziwa nge-porcelain elula noma ubumba. Izitsha ezivela kulezi zinto zizobonakala zihle kakhulu. Kungenzeka ukufaka isibani esikhwameni sesibani esikhwameni somdwebo wabadwebi noma elinye lamatafula. Ngalunye uhlobo ungasebenzisa imibala emnyama kunoma yini - hhayi ifenisha, noma kumadivayisi.
Igumbi lokuhlala ngesitayela se-Provence kufanele sibe nomthunzi wothando futhi ngesikhathi esifanayo sibe usizo futhi ukhululekile. Umfudumalo wenduduzo yasekhaya yisici esibonakalayo esiyinhloko salesi sakhiwo. I-charm yekhaya elilula lezwe elihlanganiswe nenhle yeParis lasendulo, isimo esinjabulo, nesimo esihle kakhulu sezinto zonke, izakhi zokuhlobisa ngisho nokuhlelwa kwendawo yokuhlala kunomthelela esimweni sokuthula nokuthandana.
Zama ukuhlanganisa ikhishi negumbi lokuphumula
Umklamo wangempela wekhishi-studio
Sakha ingaphakathi egumbini lokuphumula ngezandla zethu
Izicathulo Wamathambo izingane nge hallux valgus (ukubuyekezwa)
Indlela yokwenza ukulungiswa ekhishini: izigaba eziyinhloko kanye nezincomo zochwepheshe